'फोर्ब्स'को सूचीमा परेकी प्रतिमा, जसका बाआमा गल्फकोर्समै छन् - खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
'जनावर चिडियाखानामा कसरी बस्दा हुन् ?'
चैत्र २१, २०७६ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वलाई नै संकटमा पारिरहेको बेला अमेरिकी म्यागजिन फोर्ब्सले घोषणा गरेको एसियाका प्रभावशाली युवाहरूको सूचीमा परेपछि गल्फ खेलाडी प्रतिमा शेर्पाले बेग्लै किसिमको सुख महसुस गरेकी छन् ।
‘द फोर्ब्स थर्टी अन्डर थर्टी एसिया २०२०’ मा इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड स्पोर्ट्सतर्फ प्रभावशाली ३० युवामा परेपछि प्रतिमाले शुक्रबार भनिन्, ‘सन् २०२० मा सुरुबाटै एकदमै नराम्रा खबरहरू सुनिरहेकी थिएँ । यो वर्ष नै त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो । हिजो यो (फोर्ब्सको सूची) सुनेपछि ओके, राम्रो आयो भन्ने भयो । खाली नेगेटिभमात्रै होइन, पोजिटिभ पनि हुन्छ र राम्रो पनि भइरहेकै रहेछ भन्ने लाग्यो ।’
एक वर्षयता अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अध्ययनसँगै खेललाई निरन्तरता दिइरहेकी उनीसँग नेपालका युवा उद्यमीहरू निकिता आचार्य, किरण तिम्सिना (दुवै अर्वान गर्ल), रोहित तिवारी (फुडमारियो), जेसेलिना राणा र शुभांगी राणा (दुवै प्याडटूगो) फोर्ब्सको ३० वर्षमुनिको महादेशकै प्रभावशाली युवा रिटेल एन्ड इकमर्स तथा सोसल अन्टरप्रेनर्स विधाको शीर्ष ३० सूचीमा छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलसँगैको रोयल नेपाल गल्फ क्लब (आरएनजीसी) परिसरमै रहेको एउटा सानो घरमा हुर्किएकी २० वर्षीय प्रतिमा भन्छिन्, ‘अहिले पनि धेरैले नेपालमा गल्फ खेल्छ र भनी सोध्छन् । यसले (फोर्ब्सको सूची) विश्वमै नेपालको गल्फको प्रचार भएको महसुस भइरहेको छ । यो नेपाली गल्फकै लागि पनि राम्रो हो ।’उनले थपिन्, ‘गल्फ धनीहरूको खेल हो भन्ने सोचाईमा परिवर्तन आएजस्तो लाग्छ र यसप्रति खुशी लागेको छ । अझै केही गर्ने उत्साह बढेको छ ।’
आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारकी उनी हाल एउटा अमेरिकी परिवारको सहयोगमा सान्ता बार्बरा सिटी कलेजमा बीबीए दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । उतै गल्फको नियमित अभ्यास गर्छिन् । उनका बुबा पासाङ र आमा कल्पना आरएनजीसीको गल्फ कोर्स क्षेत्रकै त्यही सानो घरमा बसिरहेका छन् । बुबाआमा गल्फ कोर्समा काम गर्छन् । उनी अभिभावकसँग हरेक दिन गफ गर्छिन् ।
फोर्ब्सको सूची सार्वजनिक भएपछि त्यसमा आफू पनि रहेको प्रतिमाले अभिभावकलाई बताएकी थिइन् । ‘ममी बाबालाई बुझाउनै गाह्रो भयो, कसरी बुझाउने भयो,’ उनले भनिन्, ‘अझै राम्रो गर्नु भन्नुभयो । म खुशी हुने बित्तिकै उहाँहरु खुशी हुनुहुन्छ, यस्तो बेला (महामारी) पनि राम्रो खबर सुनाइस् भन्नुभयो ।’
तस्बिर सौजन्य : माइकल मोन्ट्यान
उनले डेढ महिनाको बिदामा घर फर्किन मे १४ को हवाई टिकट किनेकी थिइन् । ‘कोरोनाले टिकट नै क्यान्सिल भयो । घर आउनै नपाउने भयो । कस्तो बोर लागिरहेको छ,’ उनले सुनाइन् । उनलाई बधाईको ओइरो लागिरहेको छ ।
कोरोना : जनावर चिडियाखानामा कसरी बस्छन् होला ?
प्रतिमा एक वर्षयता क्यालिफोर्नियास्थिथत भेन्चुरामा मोन्त्यान दम्पत्ती माइकल र तान्यासँगै बस्छिन् । जसलाई उनी बाआमा भन्छिन् । डिसेम्बर, २०१९ मा वुहानबाट सुरु भएको कोभिड १९ को महामारीले अमेरिकालाई पनि संकटमा पारेको पछिल्लो दुई साता यो परिवार पनि घरमै सीमित भएको छ ।
‘यहाँ (क्यालिफोर्निया) लकडाउन गरिएको छैन । कोरोनाबाट बच्नको लागि घरमै बस्नु भनेको दुई साता भयो । हामी घरमै छौं । खानेकुरा किन्न ग्रोसरी जानेबाहेक बाहिर निस्कने गरेका छैनौं,’ प्रतिमाले सुनाइन् । केही दिनयता हल्का राहत पनि महसुस गरिरहेकी छन् । भन्छिन्, ‘क्यालिफोर्नियामा अहिले अरु राज्यको तुलनामा अलि कम भयो भनिरहेको छ, अस्ति दोस्रोमा थियो अहिले चौथोमा छ ।’ एलए टाइम्सकाअनुसार क्यालिफोर्नियामा बिहीबारसम्म ११ हजार २ सय ७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको र त्यसमध्ये २ सय ४६ जनाको मृत्यु भयो । बिहीबारमात्रै १ हजार २ सय ६९ जनामा पोजिटिभ देखियो भने ३१ जनाको ज्यान गयो ।
महामारीको त्रासले घरमै बस्नुपर्दा चिडियाखानामा बसेका जनावरहरूको खुबै याद आएको बताइन् । भन्छिन्, ‘हामीलाई केही दिन घरमा बस्नै गाह्रो भएको छ भने चिडियाखानामा जनावरहरू त्यसरी कसरी बस्नसक्छ ? उनीहरूलाई पनि दौडिन मन लाग्छ होला । दौडन, खेल्न नपाउँदा जीउ कस्तो हुन्छ होला ? मनमा यस्तै यस्तै कुरा आइरहेको छ ।’
‘भाइरसबाट सुरक्षित रहनको लागि घरमै बस्नुपर्छ र मुख्य कुरा नै यही हो,’ उनले भनिन्, ‘ममात्रै होइन, विश्वको सबैजना हामी परिवारजस्तै भएका छौं कोरोनाविरुद्ध लड्न ।’ कहिलेकाही बाहिर निस्किदाको अवस्थाबारे उनी भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीं ड्राइभ गरेर ममी (तान्या) सँग ग्रोसरी जान्छु । तर, म भित्र पस्दिनँ, ग्लोभ्स र मास्क लाएर उहाँ आफै जानुहुन्छ । कुकुर डुलाउन कहिलेकाहीं निस्किन्छु । विकिन्डमा पार्कमा सबै जना कुकुर डुलाइरहेको देख्छु, अनि डर लाग्छ, फर्किहाल्छु । त्यो हेर्दा कस्तो नडराएको, गम्भीर नभएको जस्तो लाग्छ । तर, आफैलाई सोंच्छु उनीहरू पनि त उस्तै हो भन्ने लाग्छ ।’
उनका अनुसार क्यालिफोर्नियाको पार्कलगायत सार्वजनिक स्थलहरूमा भीड भने पहिलाको तुलनामा घटिरहेको छ । ठूला पसल, सपिङ मल, रेस्टुराँ खुलिरहेकै छ । रेस्टुराँमा त्यही खानेभन्दा टेक—अवेको लागि खुला छन् । केही स्थानमा खोल्ने समय तोक्न पनि सुरु भएको छ ।
‘न्युज हेर्नै दिक्क’
दुई साताअघिसम्म उनको दैनिकी हुन्थ्यो कलेज, गल्फ र जिम । भन्छिन्, ‘घरै बस्न एदकमै गाह्रो । हिँडिरहने बानी भएकोले कता जाने, के गर्ने छटपटी हुँदोरहेछ ।’ घरमै सीमित हुँदा केही सिक्ने अवसर पाएकोमा भने उनले खुशी व्यक्त गरिन्, ‘यो समयमा आफूले आफैंलाई सम्हाल्न सिकियो । जस्तो कि यति बजे यो गर्छु, त्यो गर्छु । मेरो लागि खुशीको कुरा हो यो ।’
उनी सोल पार्क गल्फ कोर्समा शनिबार र आइतबार पूरै दिन बिताउँथिन् । अरु बेला दैनिक कम्तीमा २ घन्टा अभ्यास गर्थिन् । तर, यो कोर्स महामारीको कारण बन्द गरिएको दुई साता भइसक्यो । १ महिनाको लागि बन्द गरिएको हो । त्यससँगै जिम पनि बन्द भयो ।
प्रतिमा भन्छिन्, ‘घरमै दिउँसो ४ बजेतिर वर्कआउट गर्छु । गल्फ टिमको ग्रुप च्याट छ, अनलाइन भएर सबैले सँगै गर्छौं । अहिले धेरैजना घर फर्किसके । यस्तो नयाँ अनुभव भइरहेको छ, जुन कहिल्यै सोचेको थिएन । यहाँ सबैले भात मनपराउँछन्, पकाएर खाइरहन्छौं । मःमः भने खुबै मिस हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
कोरोनाको त्रासमा नेपालमा लकडाउन भए पनि गल्फ कोर्समै रहेकाले हिँड्डुल गर्न बुबाआमालाई सजिलो रहेको पनि उनले सुनाइन् । भन्छिन्, ‘लकडाउनमा सबैले घरै बसेर सुरक्षित रहने प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नो ज्यान मात्र होइन, यसबेला हामी एकअर्कामा निर्भर छौं । त्यसैले सुरक्षित बस्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ, सावधानी अपनाउनुपर्छ ।’
उनी बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म अनलाइन क्लास लिन्छिन् । ब्रेकफास्ट लिएपछि टीभी सिरिज ‘न्यू गर्ल’हेर्छिन् । त्यसपछि पढ्न बस्छिन् । अहिले अमेरिकी इतिहाससम्बन्धी किताब पढिरहेको उनले बताइन् । डायरी पनि लेख्न थालेकी छन् । डिनरपछि नेट्फिलिक्सतिर लाग्छिन्, 'टाइगर किङ' हेर्न । ‘पहिला कोर्सको बुकबाहेक अरु खासै पढ्ने, डायरी लेख्ने बानी थिएन’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीं टीभीमा समाचार पनि हेर्छु । तर, धेरै मरेको खबरमात्रै आइरहेको हुन्छ । त्यसैले न्युज हेर्नै दिक्क लाग्छ ।’
पहिलो ‘प्रो’ बन्ने चाहना
११ वर्षको भएदेखि गल्फ खेल्न थालेकी प्रतिमाको गल्फ मोह र अभावग्रस्त जीवनलाई लिएर ईएसपीएनले दुई वर्षअघि ‘अ माउन्टेन टु क्लाइम्ब’वृत्तचित्र बनाएको थियो, जसले उनलाई विश्वमै चर्चित बनाइदियो । यसमा फोर्ब्सको एसियाकै प्रभावशाली युवाको सूचीले उनको करिअर र जीवनलाई थप उचाई दिनसक्छ ।
उनी नेपालकी नम्बर १ महिला गल्फर हुन् । गल्फमा हालसम्म नेपाली महिला गल्फर प्रो (व्यवसायिक खेलाडी) बनेका छैनन् । ‘नेपालको पहिलो महिला प्रो बन्न चाहन्छु । त्यसैका लागि मिहिनेत गरिरहेकी छु,’उनले भनिन् । पाँच हृयान्डीक्यापमा खेल्ने गरेकी उनले नेपाल र अमेरिकाको व्यावसायिक गल्फका केही प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पनि पाएकी छन्, एमेच्योरको रुपमा । ती प्रतियोगितामा उनको प्रदर्शन भने त्यस्तो उत्कृष्ट भएन । उनले गत वर्ष गल्फका सुपरस्टार टाइगर उड्सलाई भेट्ने अवसर पनि पाइन् र सँगै ड्राइभिङ रेन्जमा केही बल प्रहार पनि गरिन् ।
उनी फाल्डो सिरिज नेपाल च्याम्पियनसिपमा तीनपल्टकी विजेता हुन् । फाल्डो सिरिजका विजेता ग्रान्ड एसिया फाइनल खेल्न पाउने गर्छन् । तर, नागरिकता नबनेकै कारण सन् २०१६ र २०१७ मा विदेश यात्राको अवसर गुमाउनु पर्‍यो । बुबाको नागरिकता नभएपछि उनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निक्कै दौडधुप गर्नुपर्‍यो । यसमा उनलाई गत वर्ष हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले सहयोग गरेका थिए । उनलाई पढाईसँगै गल्फमै व्यस्त राख्न पनि शेर्पाले साथ दिएका थिए ।
नागरिकता हात पारेपछि उनले फाल्डो सिरिज ग्रान्ड एसिया फाइनल २०१८ भियतनाममा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाइन्, त्यहाँ पनि उनको प्रदर्शन उल्लेखनीय भएन । गत डिसेम्बरमा नेपालले आयोजना गरेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा घरेलु महिला खेलाडीले गल्फको टिम स्पर्धा कास्य पदक हात पारेका थिए । यसमा पनि प्रतिमा थिइनन् । भन्छिन्, ‘कलेज बिदा नमिलेर सागमा सहभागी हुन पाइनँ, जुन मेरो लागि एकदमै दुखको क्षण हो ।’
प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ २१:३४
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतलगायत सम्पूर्ण अदालतले यही चैत २८ गतेसम्म अतिआवश्यक सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि अतिआवश्यक सेवा मात्र सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यसलाई यही चैत २८ गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । अदालतको यसअघिको पूर्ण बैठकले आजसम्मका लागि अतिअवाश्यक सेवा मात्र प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरुले १५ दिनको तलब उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले मातहतका अदालत तथा न्यायाधीकरणका न्यायाधीशलाई कोषमा सहयोगस्वरुप रकम उपलब्ध गराउने बारेमा लेखी पढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ २१:२२